jeudi, 14 novembre 2019 19:30
Vatofotsy – Antsirabe: Lehilahy nitsoraka tao ambany kamiao, maty tsy tra-drano
Lehilahy iray tokony ho 40 taona no maty nitsoraka tao ambany kamiao, io maraina io, tokony ho tamin'ny 9 ora teo ho eo, teo Vatofotsy Antsirabe. Raha ny nambaran'ireo nahita ny loza dia nandrasan'ilay lehilahy handalo ilay kamiao dia nitsoraka tao ambany izy.
Tsy tsikaritry ilay mpamily izany raha tsy olona no nihorakoraka nanakana azy. Maty tsy tra-drano ilay lehilahy ary tapatapaka avokoa ny ratsambatany.
Tsy mbola fantatra aloha hatreto ny havan'ity lehilahy namono tena ity. Efa tonga nizaha ny razana ny mpitandro filaminana.
Tamin’ny 13 jolay 2019 niverenan’ny Barea an’i Madagasikara an-tanindrazana, taorian’ny dingana lehibe vitany tonga teo amin’ny ampahefadalana tamin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika andiany faha-19 natao tany Egypta no nanambaran’i Andry Rajoelina, filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, teo Mahamasina ny tetikasa hanatsarana ny kianja monisipalin’i Mahamasina mba hahazaka mpijery hatrany amin’ny 50 000 ka hatramin’ny 60 000 sy hanara-penitra.
Raha ny vaovao notaterin’ny gazety mpivoaka isan’andro Midi Madagasikara, androany, dia hatomboka amin’ny volana desambra 2019 io ny fanavaozana sy fanitarana ny kianja monisipaly Mahamasina, ary hovitaina alohan’ny 26 jona 2020 ny asa amin’izany.
Tamin’ny taona 1990, nampiantranoan’i Madagasikara ny Lalaon’ny Nosy andiany fahatelo no nisy asa fanitarana lehibe natao tamin’ity kianja ity, ahafahany mandray mpijery baolina manodidina ny telo alina.
jeudi, 14 novembre 2019 16:06
Gare Routière Maki-Andohatapenaka: Nitokona ireo mpitatitra amin’ny zotra nasionaly
Mitokona ireo mpitatitra amin’ny zotra nasionaly amin’ny lalam-pirenena faha-6, faha-4 ary Voalohany. Navoakan’izy ireo ivelan’ny toby fiantsoanana ny fiara androany. Raha ny filazan’ireo mpitatitra dia tsy mety amin’izy ireo ny fepetra napetraky ny mpitantana ny toby fiantsonana sy ny atokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety.
Anisan’ny fepetra vaovao ny hoe: foanana ny « soute » na ilay toerana namboarina manokana hametrahana entana ao ambany fiara ; ferana ho 15kg ny entana azon’ny mpandeha iray entina ary tsy mihoatra ny 80cm ny haavon’ny entana eny ambony fiara.
Niray hina tamin’ireo namany nanao fitokonana tetsy Andohatapenaka ihany koa ireo mpitatitra amin’ny zotra nasionaly ao Mahajanga.
jeudi, 14 novembre 2019 15:57
Antananarivo Renivohitra: Hiadihevitra etsy amin’ny Lapan’ny tanàna indray ireo kandida Ben’ny tanàna
Fihaonana mivantana fanindroany ity hotanterahina anio tolakandro etsy amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely ity, taorian’ny nokarakarain’ny mpiasan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny 8 novambra lasa teo.
Ny FES (Friedrich-Ebert-Stiftung) no mikarakara ity fampihaonana an’ireo kandida Ben’ny tanàna miisa dimy anio ity, arahina adihevitra.